Samy tsy nisy nanaiky ho tompon’antoka na ny filoha tamin’izany na ireo nitarika, fa ny tsy azo lavina dia maro ny faty niampatrampatra, nisy ny naratra sy lasa nitondra takaitra. Vitavita ho azy tsy nisy tohiny intsony ny raharaha, ary tahaka izany hatrany no niseho teto amin’ny firenena na nialoha na taorian’ny raharaha 10 aogositra. Nitohy hatrany io hoe “vitavita ho azy” io taty aoriana indrindra fa tato anatin’ny 10 taona latsaka kely. Vitavita ho azy ny fanonganam-panjakana, ka mihevitra ny hikosoka ny tantara sy te hivoaka ho olo-marina, ary maniry mafy ny mbola haka fahefana ny olona efa naloto tamin’ny famotehana firenena. Vitavita ho azy ny fandrobana sy ny famotehana fananan’olona. Vitavita ho azy avokoa ny zava-drehetra, ka zary afa-maina sy sarimihetsika sisa atao amin’ny mpanao kolikoly amina miliara maro,... Mbola ho maro ny zavatra ho vitavita ho azy eto ato ho ato, raha mbola manaiky lembenana hatrany ny Malagasy. Efa tena iainantsika sy ataon’ny mpanao politika fitaovana mantsy ilay hoe ny Malagasy mora manadino, ka ho avy indray izy amin’ny angady sy ny harona hambabo sy haka ny fon’ny maro, saingy ho vitavita ho azy ny fampanantenana sy lango malefaka, fa ny teo ihany no ho eo raha toy mbola ny Fanjakana Mampiesona sy ny mitovy karazana aminy no ho eo!